निवर्तमान (Nibartaman) ||: January 2011
कर्णाली पुलैमाः बाह्र बजे हावा सरर ....
नेपालगञ्जको पुष्पालाल चोकमा आइपुग्दा गाडीको ट्या“ट्या“ र टु“टु“ले कलंकी चोकको कोलाहलकै झल्को दिन्थ्यो । मंसिरको चिसो सिरेटोले नेपालगञ्जलाई त्यति धेरै असर नगरे पनि बिहानीपखको गुलावी जाडोले भने मन छाएकै थियो । चोकमा गाडीका स्टाफहरु यात्रुहरुलाई बोकु“लाझैं गरी तानातान गरिरहेका थिए । हर्ेदाहर्ेर्दै किया गाडी वाला र माइक्रोबसवालाबीच झडपै पर्लाजस्तो पो भयो त ! जेहोस् अर्को एउटा अलि संयमित स्टाफ आएर समन्वय गर्दा दर्ुइबीचको गलफति टुंगियो । म धनगडी जान हि“डेको बबुरो पनि किया र माइक्रोबीचको जुहारीले एकछिन् त रनभूल्लमै परेँ । पछि माइक्रोबसको दर्ुइसय पचासको अफर स्वीकार गरेर बसको एउटा सिट रिजर्भ गरेर बसे“ । करिब आधा घन्टापछि माइक्रोबसले नेपालगञ्ज त छाड्यो तर कोहलपुरमा पुगिसकेपछि बसले फेरि लामै विश्राम लिनेभयो ।
अघिल्लो दिनको ताजा अपडेटका लागि म अखबारका पानाहरुमा आ“खा दौडाउ“दै थिए“, छेउबाट कसैले कोट्याएझैं लाग्यो । यसो फर्केर हर्ेदा एक जना मयलले कटकट्टीएको, चार ठाउँमा भ्वाङ परेको आधा तन ढाक्ने लुगा लगाएको बालक बसका यात्रुहरुसित पैसा मागिरहेको थियो । मलिन आ“खाले याचना गर्दै हातमा सिफारिसको फोटोकपी बोकेर केही पाउने आशमा बसका यात्रुहरुतर्फहात फिँजाइरहेको त्यो बालकतर्फकतिपय यात्रुहरु खोक्रो सभ्यताको परिचय दिँदै गाली र तिरस्कारको उपहार बर्सर्ााहेका देखिन्थे भने कोही केहीथान सिक्का तेर्स्याइरहेका थिए । मैले पनि आफ्नो खल्तीबाट दर्ुइ रुपै“याको सिक्का निकालेर उसको हातमा राखिदिए“ ।
यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । हामी दिनहुँ यस प्रकारका घटना देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौं । तथ्याङ्क भन्छ मुलुकभर हजारौंको संख्यामा सडक बालबालिकाहरु रहेका छन् । त्यस्तै जोखिमपर्ूण्ा काम, घरायसी कामका लागि पनि दशौं हजार बालबालिकाहरुलाई प्रयोग गरिएको तथ्य हामीबाट लुकेको छैन । उच्च ओहदाका सरकारी कर्मचारी, पुलिसदेखि मन्त्रीसम्मले बालबालिकाहरुलाई घरेलु श्रमिकको रुपमा राख्ने गरेको र तिनीहरुलाई चरम यातना दिने गरेको खबर बेलाबखत पढ्न, हर्ेन र सुन्नमा आउ“छन् । यी सडक बालकालिकाहरु रहरैले माग्न हिँडेका भने पक्कै होइनन् होला । तिनको उचित हेरविचार र शिक्षादिक्षामा राज्यले कुनै चासो नलिएको प्रष्टै देखिन्छ । यहा“ करोडौं रकम राज्यकोषबाट खर्च गरेर अन्टसन्टको सभासमारोह, यज्ञ, विद्यालयको वाषिर्कोत्सव उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रिपतिसम्म देशदौडाहमा निस्कन्छन् तर ती दिनहीन बालबालिकाको गास र बासको सवालमा कुनै काम हु“दैन । यस्तै सोच्दासोच्दै बसले अगाडि बढ्ने संकेत स्वरुप प्वा“क्क हरन बजायो म झल्या“स्स ब्युझेंझैं हुनपुगें ।
यतिबेलासम्म बस पनि यात्रुहरुले भरिसकेको थियो । सोचे“ बाटो लामै छ । अब भने बसले रफ्तार लेला नै । तर बस भने ठाउ“ठाउ“मा रोकिंदै यात्रुहरु चढाउने र ओराल्ने गर्दा बुटवल वरपर चल्ने लोकल बसझैं लाग्दथ्यो । बस्ती सकिएपछि बाटोमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले पनि चेकपोष्टले दिएको टाइम कार्डको आधारमा गुड्नु पर्ने र निकुञ्जको बीचबीचमा रहेको चेकपोष्टमा हुने चेकजा“चले चिसापानीसम्मको यात्राले खासै रफ्तार लिन त सकेन नै । र पनि निकुञ्जको वरपर कुनै जंगली जनावरको दर्शन हुन्छ कि भन्ने आशले मेरा आ“खा भने एकटहले सडकछेउको जंगल र झाडीहरुमा केन्द्रित गरेको थिए“ । तर, एकाध रुपमा सुनिने चराचुरुङ्गीहरुको चिरबिराहटबाहेक जनावरको नाममा आम रुपमा देखिने ढेडु बा“दरसम्म पनि दृष्टिगोचर भएन । कर्ण्ााली तरेर चिसापानी पुग्दा मध्यान्हृको बाह्र बजिसकेको थियो । चिसापानीमा पुगरे गाडी रोकियो । म पनि गाडीबाट ओर्लिएर जीउ तन्काउनतिर लागें । बाह्र बजे हावाको झोँकाले पुरै चिसापानी सुसाइरहेको थियो भने कर्ण्ाालीको चिसो स्या“ठले मुटुनै कमाउलाझैं गरेको थियो । गाडीवालाले खाना खान उर्दि जारी गर्यो । म पनि छउतिरको भान्छाघरतर्फलागें ।
करिब आधाघन्टाको विश्रामपछि बसले रफ्तार लियो । अबको भूगोल मेरालागि नितान्त नौलो थियो । नया“ ठाउ“को दृष्यावलीलाई आ“खामा कैद गर्नैको लागि मेरा नजर हरबखत सिनेमाका पर्दाझैं परिवर्तन भइरहने बाहिरी परिवेशमै अल्भिmएका थिए । यद्यपि माइक्रोबसको रफ्तार भने पुरानै गतिमा कायम थियो । हरेक बसस्टपमा घ्याच्चघ्याच्च रोकिइ यात्रुहरु झार्ने र चढाउनमै व्यस्त देखिन्थे, माइक्रोका सहचालकद्वय । छेवैमा बसेका एकजना यात्रुलाई त असह्य नै भएछ क्यारे, ँनेपालगञ्जबाट सात बजे छुटेको बसलाई महेन्द्रनगर पुग्न कति घन्टा लाग्छ - लोकल बसलेझैं स्टपैपिच्छे रोकेर गन्तव्यमा कहिले पुग्छ, हाम्रो कामै नभएझैं दिनभरी सडकमै गुडिरहने -' भन्दै उसहचालक महोदयको झ्या“को झारे । त्यसपछि भने बस रोकिने क्रम अलि कम भयो ।
कैलालीको अत्तरिया पुग्दा त्यस्तै तीन जति बजेको हु“दोहो । बस महेन्द्रनगर जाने हु“दा म लगायत धनगढी जाने केही यात्रुहरुलाई गाडीवालाले अर्को बसमा चढाइदियो । धनगढी जाने बसभने खालिनै थियो । जेहोस्, त्यो कोचाकोच र कोलाहलबाट भने उन्मुक्ति पाएझैं लाग्यो । करिब पन्ध्र मिनेटपछि हामी चढेको बस गुड्यो । नया“ भूगोल र परिवेशका दृष्यहरुलाई आ“खामा कैद गर्न उद्यत मेरा आ“खाहरु भने चारैतिर नाचिरहेका थिए । बसले धनगढी बसपार्कमा पुगी विश्राम लि“दा त्यस्तै चारजति बजेको थियो होला । बसपार्कबाट मित्र सुरेश बमलाई फोन गरे“ र उनकै लोकेशन अनुसार एउटा रिक्सा चढेर अगाडि बढें । छत नभएका रिक्सामा पनि केही नया“पन देखियो । करिब दस पन्ध्र मिनेटपछि मित्र बमको अफिसमा पुगेर हार्दिकता साटासाट भयो र केहीबेर सम्बन्धित कामको बारेमा छलफल पनि भयो । त्यसैदिन धनगढीमा सुदूरपश्चिम महोत्सव सुरु भएको रहेछ । अब यसैपनि धनगढी पुगिसकेपछि महोत्सव त हर्ेर्नै पर्यो । यसअघि मध्यपश्चिमको सर्ुर्खेत महोत्सव अवलोकनको स्मृति ताजै हु“दा सर्ुर्खेत महोत्सवको ह्याङ्ओभर कायमै थियो । त्यसैले महोत्सव हर्ेन लागियो जिविसको प्रांगणतर्फ।
विभिन्न रंगिचंगि ब्यानरहरुले रंगिएको धनगढी बजार सा“झको लोडसेडिगंको समयमा पनि झिलिमिली नै देखिन्थ्यो । औद्योगिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, कृषि तथा पर्यटन मेला नाम दिइएको उक्त महोत्सवमा रहेका घरेलु उद्योग, कृषि, वनपैदावार, जडिबुटी, हस्तकला, स्थानिय प्रविधी, स्थानिय आदिवासीहरुको खाना तथा कलासम्बन्धी स्टलहरु उल्लेखनीय थिए । अल्लोबाट बनेका कपडा, ढाकाबाट बनेका सल, रुमाल, टोपी लगायतका कपडाहरु पनि आकर्षाका केन्द्रविन्दु नै देखिन्थे । महोत्सवको अर्को सबल पक्ष भनेको स्थानिय सुदूरपश्चिमको सांस्कृतिक झा“कीहरु जस्तै थारु नाच, सोरठी नाच, देउडा, झ्याउे आदिको पर््रदर्शनी नै देखियो । समग्रमा सुदूर महोत्सव दर्शकहरुको चहलपहल र कृषि, औद्योगिक, हस्तकला, स्थानिय प्रविधी आदिको पर््रदर्शनीका लागि उल्लेखनीय नै देखियो । र पनि अन्य स्थानहरुमा झैं त्यहा“पनि स्थानिय उत्पादनको बिक्री पर््रवर्द्धनमा भन्दा बजारी सामानहरुको बिक्रीलाई विशेष जोड दिइएको देखियो । आखिर चरम् उपभोक्तावादी चिन्तनमा फँसिसहेका हामीले जस्तोसुकै महोत्सव र मेलाहरुमा पनि उही बहुराष्ट्रिय निगमका उत्पादनहरुको बिक्री र पर््रवर्द्धनलाई नै जोड दिइरहेका न छौं ।
त्यसदिन दिन मित्र सुरेश बमकै घरमा बस्ने कार्यक्रम तय भयो । अघिल्लो दिन कर्ण्ाालीको भात अलि बढीनै भएछ क्यार ! सा“झसम्म ठीक रहेको मेरो पेटले भोलिपल्ट बिहानै भने धोका दियो । बजारतिर गएर ओखतीका गोली निलेपछि भने केही राहतको अनुभूति भयो । बिहानको खाना खाइओरी निस्क“दा दस बजिसकेको थियो । मित्र सुरेशले मलाई बसपार्कसम्म छाडिदिनुभयो । म भने महेन्द्रनगर घुम्नका लागि त्यसतर्फजाने बसमा चढें । करिब पन्ध्र मिनेटपछि छुटेको बस अत्तरियामा आधाघन्टा रोकियो । त्यसपछि पनि बसको गतिले रफ्तार लिन सकेन । हुनत धनगढीबाट छुटेको बसले लोकल गर्ने नै भयो । मलाई भने बसको रफ्तार र गति भन्दा पनि नया“ भूगोल र परिवेशलेनै आकषिर्त पारिरहेको थियो । बसले महेन्द्रनगर पुर्याउ“दा दिउ“सोको करिब दर्ुइ बजेको हु“दोहो । महेन्द्रनगरको बसपार्कमा ओर्लिएपछि बसपार्कको छेवैमा र्सार्वजनिक सौचालयको ठेक्का लिएर बसेका गुल्मी घरभएका बुद्धिलाल भुसालस“ग भलाकुसारी भयो । त्यसपछि महाकाली पारी रहेका चा“दनी र दोधारा जोड्ने संभवत नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुंगे पुल हर्ेर्ने रहरले त्यतातिरको बारेमा सोधपुछ गरें र उनैको सल्लाह अनुसार मोटरसाइकल ट्याक्सीमा चा“दनी दोधारा जान भनेर निस्किए“ ।
मोटरसाइकल ट्याक्सीका चालक सुरेश सिंह भाटस“ग चा“दनी दोधारा पुलको अवलोकनका लागि दर्ुइ सय रुपैंयामा कुरा मिल्यो । त्यसपछि करिब एघार किलोमिटरको कच्ची सडकमा धुलो उडाउ“दै हर्ुइकिइयो, मोटरसाइकल ट्याक्सीमा । अरु र्सार्वजनिक सवारी साधनहरु नचल्ने हुनाले चा“दनी दोधारा जानका लागि सवारीको एकमात्र विकल्प मोटरसाइकल ट्याक्सी रहेछ । लामो समयदेखि सुदूर पश्चिममा पत्रपत्रिका व्यवसाय गर्दै मोटरसाइकल ट्याक्सी चालक -धनी) भाटले पार्टटाइम पेशाका रुपमा चा“दनी दोधारामा मोटरसाइकल ट्याक्सी चलाउ“दै आएका रहेछन् । उनले आफ्नो पेशाका साथै समसामयिक राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा पनि आफ्नो गुनासो पोखे । लामोसमयदेखि पत्रपत्रिका बेच्दै आएका उनीले सुदूर पश्चिमका मिडियाहरुको प्रभाव र स्थितिका बारेमा पनि आफ्ना अनुभव बा“ड्ने काम गरे ।
बाटोमा यस्तै भलाकुसारी गर्दै करिब चालिस मिनेटको यात्रापछि हामी चा“दनी दोधारा जोड्ने झोलुंगे पुलमा पुग्यौं । करिब डेढ किलोमिटर लमाइ भएको उक्त झोलुंगे पुलमा आठवटा खम्बाहरु रहेछन् । प्रशासनिक लगायत सबै कामका लागि दिनहु“ महाकालीवारी आउनुपर्ने चा“दनी दोधारा निवासी आम नेपालीहरु महाकालीमा पुल नहु“दा निकै समस्यामा परेका थिए भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । पुल बनिसकेपछि उनीहरुलाई आवतजावत गर्न त केहीहदसम्म सजिलो भएको रहेछ तर अझैपनि महेन्द्रनगरबाट कुनै र्सार्वजनिक सवारी नचल्दा उनीहरु मोटरसाइकल ट्याक्सीको महंगो भाडा तिररे एउटै मोटरसाइकलमा तीनचारजनाको जोखिमपर्ूण्ा यात्रा गर्न बाध्य रहेछन् । सम्बन्धित निकायले चा“दनी दोधारा जोड्ने झोलुंगे पुलसम्म नियमित रुपमा जीप संचालन गरे महाकाली पारिका जनताहरुलाई निकै राहत हुने थियो कि !
समग्रमा मेहनती र जागरुक मोटरसाइकल ट्याक्सी चालक भाटले धेरै कुराको बारेमा जानकारी दिए । उनको सहयोग र सद्भावका लागि साधुवाद !
The Butwal Today National Daily